ဇာတ်စင်အလင်းပစ္စည်းကိရိယာပေးသူ - Kale ဇာတ်စင်အလင်း
Head Light ရွေ့လျားနေသည်
230ဦး ခေါင်းအလင်း Moving Beam ကို
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများမီးလုံး LED 250W 3in1 Spot Beam Gobo Moving Head Light
380ဦး ခေါင်းအလင်း Moving Beam ကို
17350w Beam အစက်အပြောက်ရေချိုးအလင်း r
260W ရွေ့လျားနေသောအလင်းရောင် Pro ကိုကြည်လင်ပြတ်သားသောအစက်အပြောက်အလင်းရောင်
19pcs * 15w zoom ဇာတ်စင်မီးလုံးများကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
19pc15w 4in1 ရွေ့လျားနေသော ဦး ခေါင်းကြီးပျားမျက်စိစင်မြင့်တွင်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အလင်းကိုလျှော်ပေးသည်
36ရွေ့လျားခေါင်းကိုလျှော်အလင်း pc 10w RGBW 4in1
8 နှစ်ပေါင်း Self-run စက်ရုံ
G အရည်အသွေးအာမခံချက်(စူပါအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အာမခံနှင့်အတူ) omp ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း(မည်သည့်အလယ်အလတ်မှမခြားနားပါ,စျေးကွက်ပိုမိုရရှိရန်သင့်ကိုကူညီပါ)
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အားကောင်းသောဒီဇိုင်းအဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီးစင်မြင့်အလင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုပံ့ပိုးသူဖြစ်သည်, သငျသညျစိတ်ကြိုက်ဇာတ်စင်ဒီဇိုင်းကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်, ကလပ်ဒီဇိုင်း, ဖြစ်ရပ်များအလင်းဒီဇိုင်း, 3: D ပုံဆွဲခြင်းနှင့် mp4 အကျိုးသက်ရောက်မှု, သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်စသည်တို့ကို.
8 ဇာတ်စင်အလင်းရောင်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း; အနည်းဆုံးနိုင်ငံခြားသို့ဖောက်သည်ဒေသခံလည်ပတ်မှု2သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ ယ်ယူပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်, ထိုကဲ့သို့သော controller ကိုလေ့ကျင့်ရေးအဖြစ်, အလင်းပြပွဲဒီဇိုင်းနှင့်အလင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
ဖက်ရှင် / Auto Show အလင်းရောင်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်းထိတွေ့ပါလိမ့်မည်.
လိပ်စာ2ကြိမ်မြောက် , မဟုတ်ဘူး. 149, Dagang မြောက်လမ်း, Dagang ကျေးရွာ, Shijing Town, Baiyun ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး,တရုတ်
အလုပ်ချိန်08:30 ~ 17:30 စနေနေ့မှ Moday
ဦး ခေါင်းရောင်ခြည်အလင်းရွေ့လျားအရောင်း,လေဆာရောင်ခြည်,တန်းစီအလင်း,Led မြို့ရိုးကိုလျှော်အလင်း,ဦး ခေါင်းအလင်းကိုရွေ့လျား ဦး ဆောင်,စင်မြင့်အလင်းစက်ရုံ,ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူ ©မူပိုင်ခွင့် ©2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး